Wariye Cawaale Jaamac Salaad oo Maanta Xukun Lagu riday | maakhir.com
Bosaaso:- Wariye Cawaale Jaamac Salaad ayaa maanta waxa lagu riday Xukun isaga oo la soo taagay Maxkamada Darajada koowaad ee Magaalada Bosaaso,waxa dacwada wariyahaasi dhagaysanayay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland iyo dhamaan shacabka qabihiisa kala duwan.
Wariye Cawaale Jaamac Salaad ayaa lugu xukumay 6 Bilood oo xariga ah ,ayadoo lasheegay in uu Iibsan karo xarigiisa uuna ku badalanaya Lacag ,inkastoo aan lasheegin Lacagtan inta ay dhan tahay.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada koowaad ee magaalada Bosaaso Axmed Cabdi Awaare ayaa ka dhawaajiyay in wariyahaasi uu Maamulka Puntland ka galay danbi wayn isaga oo xidhiidh la sameeyay Budhcad afduubatay wariyi Faransiiska ahaa ee dhawaan duleedka Magaalada Bosaaso lagu qafaashay.
Axmed Cabdi Awaare waxa uu sheegay inay wariyahaasi intii uu xidhnaa looga dhaqmay si wanaagsan iyada oo aanay jirin wax Tacdiyo ah loo gaystay tan iyo intii uu ku jiray Saldhiga Magaalada Bosaaso.
Xukunka Wariye Cawaale Jaamac Salaad ayaa ku soo beegmaya xili dhawaan maamulka Puntland ay dhaliilo arintaasi ku aadan kaga imaaneysay Hay’adaha Xuquuqda Aadanaha ,oo ku eedaynayay Sababta loo xirey Wariyahaasi, iyaga oo Maamulka Puntland ku tel maamay kuwa aan si sharci ah ula dhaqmin warbaahinta Madax banaan.
Wariye Cawaale Jaamac Salaad ayaa waxa dhawaan xidhay ciidanka Booliska ee magaalada Bosaaso kuwaasi oo ku soo eedeeyay inuu xog dheraad ah ka hayo Budhcad AFduubay wariye faransiis ah oo mudo dheer duleedka Magaalada Bosaaso lagu haystay.
« Gobolka Hiiraan oo laga soo sheegay Jidgooyooyin Horle
Viila Somaliya oo Maanta Hoobiyaal lagu weerarray »